Wasiirka Ersoy: 'Waxaa jirta daraasad ku saabsan gaariga fiilada leh ee Ihlara Valley' | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia68 AksarayWasiirka Ersoy: 'Waxaa jirta daraasad ku saabsan gaariga fiilada leh ee Ihlara Valley'
24 / 11 / 2019 68 Aksaray, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Headline, TURKEY, TELPHER
wasiirka ersoy waxaa jira daraasad kusaabsan gaariga USB cable ee ihlara dooxada
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy: kesim Xafiiska Madaxtooyadda Aagga Cappadocia, waxaa jira koox muujineysa khudbad sida haddii heerkii ilaalinta gobolka la yareeyey. Runtii tani run ma ahan ..
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy wuxuu cadeeyay in Madaxtooyadda Deegaanka Cappadocia ay bilaabatay inay shaqeyso wuxuuna yiri, ıyla Madaxtooyadda Deegaanka Cappadocia, waxaa jira qeyb muujinaya sida haddii heerka ilaalinta gobolka uu yaraaday. Runtii tani run ma ahan ..
Wasiirka Ersoy, oo wareysi siinayay wariyeyaasha ku sugan Ihlara Valley Aksaray, baahiyaha gobolka ayaa ah inuu abaabulo barnaamijka safarka si loo ogaado baahiyaha, ayuu yidhi.
Ersoy wuxuu tilmaamay in howlaha laxiriira buuxinta baahiyaha gudoomiyaasha duurka si dhaqso ah iyo dhameystirka shaqaaleysiinta shaqaaluhu ay si xawli ah usocdaan wuxuuna yiri:
Waxaan bilaabi doonnaa inaan si dhaqso leh ugu xallino baahiyaha gobolkaan madaxtinimada Deegaanka Cappadocia. Madaxtooyadda Cappadocia ayaa bilaabay inay shaqeyso. Iyada oo ay weheliso Madaxtooyadda Aagga Cappadocia, waxaa jira qayb muujinaya khudbad sidii haddii ilaalintii gobolka ay yaraatay. Runtii tani run ma ahan. Nidaamka madaxtinimada goobta wuxuu leeyahay labo astaamo. Mid, keen xallin deg deg ah, labo kordhin heerka xaaladda ilaalinta. Ma jiro xaalad ilaalin oo laga dhimayo gudoomiyaha goobta, laakiin kaliya awooda fulinta ee xaalada ilaalinta ayaa loo wareejiyay gudoomiyaha goobta. Tani, dabcan, waa wax la qabtay iyada oo la eegayo qiimeynta codsiyada, in si dhakhso leh loo gudbiyo golayaasha, furitaanka wadada iyada oo la ixtiraamayo dabeecadda, qiyamka taariikhiga ah ee dadka doonaya in ay wax ka beddelaan iyo maalgashi. ”
Awoodda Miisaaniyadda ayaa sidoo kale loo oggolaaday Madaxa Goobta
Hadafkoodu waa inay kordhiyaan isku dheelitirka ilaalinta xitaa si wax ku ool ah si ay u bixiyaan dalxiiska halkan, Maamulka Field wuxuu siiyay awood aan horay loo adeegsan, Ersoy wuxuu yiri, "Waad ogtahay, waagii hore, degmooyinka inay xishoodaan markii dumin lahaayeen. Awoodda mudaaharaadka ayaa sidoo kale la siiyay madaxweynaha goobta. Hadda wixii ka dambeeya, Degmooyinku waxay leeyihiin awood ay ku gutaan hawshan, kooxdu waxay haysataa fursad kasta, sidoo kalena waxay haysataa kheyraad, inay dib u dhigto awaamiirta guddiyadayada ama agaasime waaxeedyada ku saabsan duminta, markii ay daaheen inay fuliyaan shuruuda. Sidaa darteed, ujeedkeennu waa inaan ilaalinno meeshan si wax ku ool ah waana meel caan ah oo dalxiis loo tago. Si suurtagal looga helo saamiyada badan ee dalxiiska. ”
Waxaa Jira Daraasad Ku Saabsan Gaariga Cable
Wasiirka Ersoy, oo ah weriye Ihlara Valley cable cable, terrace galaas oo kor u qaadaya su'aasha mashruuca, ayaa yiri sidan soo socota:
Var Waxaa jira daraasad ku saabsan gaariga fiilada. Waxaan sidoo kale noogu nimid naqshadda mashruuca, waan arki doonnaa. Waxa kale oo jira kuwa doonaya inay wax ka qabtaan qaybta gaarka loo leeyahay. Waxaan eegi doonaa qiimaha. Waxaan qiimeyn doonaa xalka ugu fiican. Waxaa la siin karaa shirkadda gaarka loo leeyahay qaab wareejin-ku-wareejin ah ama waxaa qaban kara wasaaraddeena. Marka ma ahan qaddarka maalgashiga ee aan macquul aheyn. Waa maalgelin aan ka dhigi karno mid aad u deggan sida wasaarad ahaan. Waxaan ku siin karnaa oggolaansho qeybta gaarka ah haddii ay talo soo jeediso iyo haddii talooyinkeeda ay macquul yihiin. Waxaan dhameystiri doonnaa qiimeynta sanadkaan ilaa dhamaadka bisha Janaayo. Ka dib markaa waanu fulineynaa go'aanka. ”
Wasiirka Ersoy, oo ah kiiloomitirkii 3,5 kiiloomitir ka dib socodkii uu la galay dadkii ka soo qaybgalay.
Gudoomiyaha Aksaray Ali Manti, hadiyad rooga gacanta Ersoy'a ee lugta kadib socodka kadib.
Khilaafaadka Awoodda in laga hortago
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara'daki Kaymaklı ka dib baaritaankii magaalada dhulka hoostiisa ku jiray oo ay booqdeen mas'uuliyiinta ayaa helay xog.
Wasiirka Ersoy, ayaa markaa kadib u sheegay weriyeyaasha, gobolka in la dardar geliyo, la ilaaliyo lagana hortago dhismaha sharci darrada ah ee Madaxtooyada Cappadocia loo abuuray si looga hirgaliyo xarumo dalxiis oo kala duwan.
Madaxtooyadda Cappadocia waxay bixin doontaa faa iido muhiim ah marka loo eego gobolka uu Ersoy ku nuuxnuuxsaday, sidaa darteedna isku dhacyada awooda ee wasaaradaha iyo degmooyinka Cappadocia ayaa sidaas yidhi.
Wasiirka Ersoy wuxuu yiri: “Markii aan hirgalineyno Xarunta Madaxtooyadda ee Cappadocia, waxaan wadnaa baaritaanno goobta ah. Waxa ugu weyn ayaa ah in la kordhiyo dakhliga Kapadosaaniya, la kordhiyo tirada maalmaha dalxiisayaasha ee jooga gobolka. Waxaa jira koror marka loo eego sanadkii la soo dhaafay. Waxaan u maleynaynaa in haddii si dhaqso leh loo maamulo Aagga Kappadocia isla markaana la kordhiyo saamiga ay ku leedahay dhiirrigelinta, waxaan rajeynayaa inay imaan doonto meeshii ay ku seegtay dalxiis. Sababta loo aasaasay Madaxtooyadda Field waa in meesha laga saaro khilaafaadka maamulka. Waxaa jiray khilaaf xaga awooda ah oo udhaxeeyay Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka, Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta, Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska iyo degmooyinka. Sababtaas awgeed, go'aamada laga soo saarayo guddiyada ayaa aad u dheeraa. Nasiib darrose, iyadoo la dheereeyo waqtiga, waxaad ku dhiirrigelisaa baxsadka. Dadku mararka qaarkood waxay sugayeen go'aanka inuu soo baxo sannadihii 8. Muddada sugitaanka ayaa sidoo kale sababtay dhismaha sharci-darrada ah. ”
Madaxtooyadda Cappadocia ayaa xustay in waqtiyadu aad u gaaban yihiin, Ersoy wuxuu yidhi, “Waan dardargelin doonnaa faylka go'aan gaadhista. Waagii hore, kaliya degmooyinka iyo Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka ayaa mas'uul ka ahaa duminta. Waqtigaan la joogo, Maamulka Field wuxuu siiyay awood dumin. Mararka qaarkood degmadu si dhaqso leh ugama aysan dhaqangelin duminta iyadoo laga walaacsan yahay doorashooyinka. Intaa ka dib, Madaxtooyadda aagga waxay ka hortegi doontaa aagaynta iyo dhismayaasha sharci darrada ah si dhakhso leh waxayna u adeegsan doonaan awoodda duminta.
Intii lagu guda jiray booqashadii magaalada dhulka hoostiisa ku taal ee Kaymaklı, Wasiirka Ersoy waxaa wehelinayey Madaxweynaha RTÜK Ebubekir Şahin iyo Duqa Magaalada Kaymaklı Harun Çekiç.
Wasiirka Ersoy, ayaa ka qayb qaadan doona safarka buufinka hawada ee maalinta berri ah, dhismaha socda ee Taariikhda Cappadocia iyo Matxafka Dhaqanka iyo xarumaha dalxiis ee kala duwan ee gobolka ayaa sameyn doona baaritaanno.
Mashruuca Gawaarida Dabka iyo Fidiyaha Dooxada Ihlara Valley…
Waxaa jira jid tareen, waxaa jira tareen xawaare ku socda, tareen xamuul…
Fagaaraha Dawladda Hoose ee Magaalada Ihlara - Ulubağ Cable Car…
Dalxiiska First Express ee Express Express Ersoy Ugurladı
Wasiirka Ersoy ayaa booqday wadada tareenka ee Hejaz
Sharaxaadda Gokcekten Cable
Go'aanka Uysal ee Boqortooyada Ingiriiska ee UBERal…
IZBAN ee dadka lugeynaya ee Torbali…
Gaariga Ihlara Valley Cable
Mashruuca Gawaarida Cable ee Ihlara Valley Cable
Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska
Madaxweynayaasha Deegaanka Cappadocia